Sida Loo Fududeeyo Baabasiirka - Talooyinka Caafimaadka Ragga Qaabka Leh | Ragga Caqliga leh
Alicia tomero | 21/08/2021 11:30 | Daryeelka shaqsiyeed, Ku habboon, Caafimaadka
Baabasiirka ama sidoo kale loo yaqaan raso waa kuuskuusyadaas ama kuuskuusyadaas kuwaas oo u muuqda kuwo bararsan meel u dhow dabada, si ay u kicin karaan xanuun badan iyo cuncun. Marar badan bararkan waxay keeni kartaa dhiig -bax xanaaqanna waxaa sababi kara saxarada adag ama kiimikada cuntooyinka qaarkood.
Qiyaastii 75% dadku waxay la kulmeen baabasiir waqti ka mid ah noloshooda. Xaalado badan waxay u dhacdaa si ku meel gaar ah iyo waqtiyo kale raaxo daradu waxay sii xumaan kartaa maalmo iyo waqtiyo kala duwan sanadka gudihiisa. Waxaa jira boomaato iyo daawooyinka gacanta kowaad, laakiin sidoo kale waxaa jira dawooyinka guriga oo aan ka dalban karno guriga.
1 Sida loo yareeyo baabasiirka kiriimyada farmashiyaha iyo daawooyinka
2 Daawooyinka guriga si loo yareeyo baabasiirka
2.1 Si fiican u nadiifi aagga ka dib saxaro kasta
2.2 Qubayska Sitz
2.3 Aloe vera iyo saliid saytuun
2.4 Baraf iyo qabow ayaa ku cadaadi
3 Goorta ay tahay inaad aragto dhakhtarka
Sida loo yareeyo baabasiirka kiriimyada farmashiyaha iyo daawooyinka
Noocyada kiriimyada ah ayaa laga heli karaa farmashiyaha ku dhowaad dhammaan farmasiiyada. Qaabkeeda waa la soo bandhigi karaa qaabka kiriimyada, cadarrada, suufka, ama suufka. Dhammaantood waxay yareeyaan bararka waxayna bixiyaan gargaar degdeg ah. Waxay ka kooban yihiin maaddooyin sida lidocaine, hydrocortisone, iyo hazel sixir si loo yareeyo xanuunka, cuncunka iyo cuncunka. Hydrocortisone laguma talinayo in la isticmaalo in ka badan hal toddobaad, maadaama ay beddeli karto dhumucda maqaarka.
Haddii xanuunku yahay mid aan loo adkaysan karin waad isticmaali kartaa xanuun joojiyeyaasha afka sida acetaminophen, ibuprofen, ama asbiriin. Hawlaheeda waxaa ka mid ah in la yareeyo bararka, xanuunka, iyo in la yareeyo raaxo -darrada. Waxaa jira masaxaya nasashada Waxa kale oo loo isticmaali karaa in lagu nadiifiyo ka dib markaad saxarooto. Waxaa ka mid ah hantidiisa waxaa ku jira hazel -ga iyo sixirka aloe si loo aaso aagga.
Daawooyinka guriga si loo yareeyo baabasiirka
Istaraatiijiyadda ugu weyn ee ay tahay inaan fulinno waa caloosha ka ilaali. Taas awgeed waa inaan beddelnaa cuntadeena, baabi'inta cuntooyinka xiisaha leh sida kafeega, theine, dhir udgoon xoog leh, basbaas iyo aalkolo. Aad ayaa loogu talinayaa cunnooyin buunbuun badan leh waxaana ka helnaa badar, khudaar iyo miro. Fiber -ka waxaan ku caawineynaa saxarada inay aad u jilicsanaato si looga fogaado muruqyada marka la saxaroonayo oo baabasiirka ka sii daraya.
Si fiican u nadiifi aagga ka dib saxaro kasta
Dhaqankan ayaa laga yaabaa inuu noqdo midka ay habboon tahay in la waafajiyo, maadaama nadiifin wanaagsan ka dib daadgureynta ayaa kaa caawin doona daaweynta degdegga ah. Kadib markaad aado musqusha waa lama huraan in la sameeyo Isticmaal saabuun iyo biyo diirran si aad u nadiifiso aagga. Isticmaalka tirtiriddu waxay kaloo noqon kartaa ikhtiyaar wanaagsan, laakiin mar haddii aysan ku jirin cadar ama aalkolo xanaaqsan.
Qubaysyada Sitz waxay ka shaqeeyaan cajaa'ibyo, maadaama ay kaa caawinayaan yareynta bararka babaasiirta si dabiici ah. Waad awoodaa diyaari faleebo gaar ah si loo daaweeyo oo loogu daro biyaha. Qubays yar ama saxan yar oo ku habboon bidetka ayaa loo isticmaali doonaa meesha aad u isticmaali doonto inaad fariisato. Faleebada waxaa lagu shubaa weelka qubeyska ama berkedda oo waa inay la xiriirtaa babaasiirta qaadata qubayska 10 ilaa 15 daqiiqo hal mar maalintii.
Geedaha ugu fiican ee shaqeeya geedka canabka ah, xabadka faraska, xashiishka sixirka iyo xaaqinka hilibka. Waxaad kaloo qaadan kartaa geedo yaryar ilaa saddex jeer maalintii faleebo ahaan. Cusbada Epsom sidoo kale waa daaweyn wanaagsan. Ku dar milixda kursigaaga ama saxanka qubeyska oo fadhiiso 20 daqiiqo ilaa aad ka dareento gargaarka.
Ku maydho Sitz biyo diiran iyo saabuun sidaas oo kale ah, waxay kaloo yareeyaan babaasiirta. Waxaad samayn kartaa 3-4 jeer maalintii 10-15 daqiiqo cashar kasta.
Aloe vera iyo saliid saytuun
Geedka canabka ah ayaa la siiyay sifooyin aad waxtar u leh xaaladaha maqaarka. Waxay leedahay saamayn kahortaga bararka oo kaa caawineysa yareynta cuncunka qeybahaanna si weyn ayay u caawin karaan daawaynta babaasiirta.
Si aad u isticmaasho, waa inaad soo saartaa jelka saafiga ah ee gudaha caleemaha geedka oo ku dabaq aagga. Waa inaad ka taxaddartaa dhismahan maxaa yeelay waxaa jira dad xasaasiyad ku leh geedkaan. Si aad tan u samayso, tijaabo hore u sii qaado adiga oo gacanta ku marinaya qadar yar 24 saacadood ka hor oo sug ilaa aysan jirin dareen -celin.
Saliidda saytuunka ayaa sidoo kale leh saamayn liddi ku ah bararka. Waxay kaa caawin kartaa inaad dib u rarto babaasiirta ka soo baxda dabada dabadeeda, adoo fartaada saliid ku marinaya oo gudaha ku baraya.
Baraf iyo qabow ayaa ku cadaadi
Haddii aaggu aad u bararo oo xanuun badan yahay, way dhici kartaa baraf mari si aad u dejiso buradaas. Barafka ku duub maro oo ku rid aagga ilaa 15 daqiiqo. Qabowga dunta ayaa kaa caawin doona yareynta bararka iyo yeelan doonaan saameyn suuxin. Cadaadis biyo qabow ah oo la dul dhigay aagga ayaa sidoo kale kaa caawin doona yaraynta raaxo daradan.
Goorta ay tahay inaad aragto dhakhtarka
Dhiig-baxa sida caadiga ah way fududahay in la daweeyo oo waa ku meelgaar. Kiisaska ay saamayntiisu adkaan karto waa dhif, laakiin waxay sababi karaan dhibaatooyin. Marka daaweyntu aysan waxtar lahayn oo xanuunku yahay mid joogto ah ama dhiig badan lumay, waa lagama maarmaan la tasho dhakhtar. Xaaladahaas qaarkood, waa loo baahday isticmaal thrombectomy, iyada oo qalliin laga saaray baabasiir ama adeegsiga isku -xidhka xargaha caagga ah, si loo joojiyo bixinta dhiigga ee baabasiirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sida loo yareeyo baabasiirka
Markay haweeney kugu fiiriso